Ciidamada dowladda Uganda ka socda Oo soo gaaray Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada ka socda dowladda Uganda ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Africa ay ka wadaan Soomaaliya ayaa soo gaaray Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho si ay ugu biraan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ka soconaya sida lagu sheegay war qoraal ah oo AMISOM ka soo baxay.
Bosco Mutambi oo ah taliyaha Ciidmadaan cusub ee ka socda dalka Uganda ee yimaaday Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadu ay garayaan 1400 oo askari ayna wax badan ka badali donaan awooda Ciidamada AMISOM ee dalka jooga.
Bosco Mutambi ayaa tilmaamay in ciidamadaan dowladda Uganda ay soo dirtay ay ka howlgali doonaan goballada Banaadir, iyo Shabelleha hoose si tageero ay u siyaan Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee goballadaas ku sugan.
“ Howgalka AMISOM waxaa ka go’an tageerida dowladda Soomaaliya si looga mira dhaliyo yoolka la hiigsanayo ee ah in dalka Soomaaliya la nabadeeyo” Sidaasi waxaa lagu yiri warka qoraalka ah ee howlgalka AMISOM ka soo baxay.
Dowladda Uganda ayaa ka mid dowladaha ka qayb qaadanaya howlgalka AMISOM waxaana Soomaaliya ka jooga ciidamada ugu badan ee howgalka AMISOM ku jira.
The Living Legacy of Helsinki